वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्था समेत दर्जन बढीले गरे लाभांश घोषणा, कसले कति ? – सुनाखरी न्युज
वाणिज्य बैंक र लघुवित्त संस्था समेत दर्जन बढीले गरे लाभांश घोषणा, कसले कति ?
Posted on: November 8, 2020 - 8:27 am
गत आर्थिक बर्षको मुनाफावाट लाभांस घोषणा गर्ने क्रम शुरु भएको छ । यसैक्रममा केही बाणिज्इ बैंक र लघुवित्तले आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका बैंकध्ये एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत लाभांश शेयरधनीलाई वितरण गर्ने भएको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकले १०.४० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थामध्ये आरएसडिसीले सबैभन्दा कम सेयर र बोनस सहित १२.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ भने समता लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै २६.३२ लाभांश घोषणा गरेको छ । साथै, लाभांश घोषणा गरेका बैंकमध्ये बैंक अफ काठमाण्डौंले १६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमइ बैंकले १६ प्रतिशत, कुमारी बैंकले १४ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चार्टड बैंकले ११.८४ प्रतिशत, सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकले ११ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकले १०.५३ प्रतिशत लाभांश पाउनेछन् ।
त्यस्तै, लघुवित्तमध्येमा मेरो माइक्रोफाइनान्सले १७.८३ प्रतिशत, फस्ट माइक्रोफाइनान्सले १३.६८ प्रतिशत, आसा लघुवित्तले १५.७९ प्रतिशत र आरएमडिसि लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले भने साधारण सभाका लागि असोज २२ गते नै बुकक्लोज गरिसकेको छ । बैंकले कार्तिक ६ गते आह्वान गरेको २२ औं वार्षिक साधारण सभा कोरोना संक्रमण बढेपछि स्थगति गर्दै २.८५ प्रतिशत नगद लाभांश अन्तिरिम लाभांशको रुपमा वितरण गरिसकेको छ । बैंकले स्थगित साधारण सभा अझै बोलाइसकेको छैन ।
बैंक अफ काठमाण्डूले पनि कार्तिक २८ गते शुक्रबार बुकक्लोज मिति तोकेको छ भने । यसअनुसार कार्तिक २७ गते बिहीबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीले मात्र लाभांश पाउनेछन् । बैंक अफ काठमाण्डूले मंसिर १५ गते साधारण सभा बोलाएको छ ।यसैगरी अन्य ६ वाणिज्य बैंकहरुले भने लाभांश वितरणका लागि बुकक्लोज गरिसकेका छैनन् ।
त्यस्तै, लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्त कम्पनीले समेत साधारण सभा तथा बुकक्लोज मिति तोकेका छैनन् । यसअनुसार ६ वटै लघुवित्तको शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ताले गत आर्थिक वर्षबाट घोषित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई साधारण सभाले पारित गरेपछि पाउनेछन् ।